श्वेतपत्रले सेयर बजारलाई कस्तो प्रभाव... :: कमल नेपाल :: Setopati
श्वेतपत्रले सेयर बजारलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?
कमल नेपाल काठमाडौं, चैत १६
साताभर सेयर बजार ५२ अंकले उकालो लाग्यो। जसको प्रमुख कारण थियो ‘श्वेतपत्रप्रति लगानीकर्ताको आश।
सेयर बजारका समस्यालाई श्वेतपत्रले सम्वोधन गर्ने सूचना पाएपछि लगानीकर्ताले खरिद चाप बढाए। न्यून अंकमा नेप्से झरेर सस्तो भएका सेयरमा खरिद चाप बढ्दा यो साताले बजारलाई उत्साह थप्यो।
आइतबार सार्वजनिक विदा परेकाले बन्द भएको बजार सोमबार ११ सय ६८ अंकमा झरेको थियो। सोही अंकमा टेवा पाएर नेप्से हाल १२ सय २० अंकमा अडिएको छ। नेप्सेको अंक मात्रै होइन, कारोबार रकम समेत बढेको छ।
नेप्सेका अनुसार अघिल्लो साताको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले कारोबार रकम बढेको छ। जवकि यस साता चार दिन मात्रै कारोबार भयो। यो साता बजार बढेकाले ११ सय ६८ अंक नै ‘बटम प्वाइन्ट’ बन्ने कतिपयको अनुमान छ। केहीले अझै घट्न सक्ने बताइरहेका छन्।
विभिन्न बहानामा किन्न चाहनेले बजार ‘घट्छ’ र बेच्न चाहनेले ‘बढ्छ’ भनेर चलाउने गरेको हल्लामा सामान्य लगानीकर्ता पिल्सिने गरेका छन्।त्यही स्वार्थकै कारण संचारमाध्यममा आउने सेयर सम्वद्ध विश्लेषण तथा टिकाटिप्पणीप्रति समेत उनीहरु आफू अनुकुल नभएमा खरो रुपमा उत्रिने गरेको पाइन्छ।
श्वेतपत्रलाई पनि लगानीकर्ताले आ–आफू अनुकुल व्याख्या गरेका छन्। यद्यपी श्वेतपत्रको प्रतिक्षा मेटिएकाले आइतबारदेखि बजार कता जाला भन्ने कौतुहलता भने बढेको छ।
सबैभन्दा पहिले हेरौं सेयर बजार सम्वन्धमा के छ श्वेतपत्रमा ?
कतिपयले अर्थतन्त्रका गम्भीर समस्याहरु केलाइएकाले त्यसले बजारलाई टेवा नदिने बरु अझै घट्ने बताएका छन्। केहीले वास्तविक समस्याहरु अर्थमन्त्रालयले स्वीकारेकाले सकारात्मक टेवा पुग्ने अनुमान गरेका छन्।
अर्थतन्त्रको अवस्था र समस्या समाधानको प्रयासमा नै बजारको उतारचढाव निर्भर रहने विश्लेषकको बुझाई छ। विश्लेषक विष्णुप्रसाद बस्याल स्वेतपत्रमा उल्लेखित समस्याहरुले बजारको वृद्धिलाई बल नपुग्ने बताउँछन्।
‘समस्याहरु छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो, तर तिनलाई सम्वोधन गर्न कस्ता नीति आउने र कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने कुराले मात्रै बजारलाई डोहोर्याउँछ’ उनले भने। यदी यी समस्यालाई सम्वोधन गर्नका लागि अर्थमन्त्रालय सक्रिय रुपमा लाग्यो र समस्या समाधान हुँदै गएमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए।
भएका समस्या सुनाउँदैमा त्यसले लगानीकर्तामा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको बुझाई छ। बजारबारे प्राविधिक विश्लेषण गर्दै आएका बस्याल वैशाखको मध्यतिरबाट मात्रै सुधार आउन सक्ने बताउँछन्।
हिजोसम्म घुमाउरो पारामा सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा पुँजी बजारका समस्याहरु केलाएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने कतिपयको बुझाई छ।
सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल भन्छन् ‘धेरै हदसम्म पुँजी बजारका समस्याहरु स्वीकार गरेकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ।’ यिनै समस्यालाई सम्वोधन गर्नेगरी अर्थमन्त्रालय अघि बढ्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।
आफूहरुले राखेका समस्याहरुलाई श्वेतपत्रमा धेरै हदसम्म स्वीकारिएको उनले बताए। ‘बजारका रोगहरु पहिचान भएको छ, अव त्यसको उपचार गर्नेतर्फ मन्त्रालय अघि बढ्नुपर्छ’ उनले भने।
अर्थमन्त्रालयकै निर्देशनमा बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन बाटो खुलाइएकाले पनि आगामी दिनमा तरलता सहज भई बजार बढ्नमा टेवा पुग्ने उनले बताए।
पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष नवराज सुवेदी बजार बढ्ने आधार अझै कमजोर रहेको औंल्याउँछन्। ‘श्वेतपत्रमा सेयर बजारका मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका डरलाग्दा समस्याहरु केलाइएको छ’ उनले भने ‘यो भनेको सेयर बजार बढ्ने आधार नहुनु नै हो।’
ढुकुटी नै रित्तो अवस्थामा रहेको कुरा औंल्याइएकाले बजार बढ्ने आधार श्वेतपत्रले नदेखाएको उनले बताए। ‘संस्थागत लगानीकर्ता नबढेसम्म बजारको विकास नहुने कुराले पनि सकारात्मक सन्देश दिँदैन’ उनले भने।
व्याजदरको स्थिति नै बजारलाई प्रभाव पार्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले व्याजदर नघटेसम्म बजार बढ्ने संभावना साँघुरिएको केहीको बुझाई छ।
बैंकहरुमा पैसा अभाव भएसम्म बजार नबढ्ने लगानीकर्ता पिताम्बर खरेलको दावी छ। ‘एकातर्फ ऋण लिनेलाई व्याज बढी पर्यो, अर्कोतर्फ पैसा हुनेहरु लो रिस्कमा निक्षेप जम्मा गरेर व्याजदरको राम्रो लाभ लिने भए’ उनले भने ‘पैसा भएकाले जम्मा गर्ने भए, ऋण लिएर लगानी गर्नेले नसक्ने भए।’
श्वेतपत्रले बजारलाई सकारात्मक र ऋणात्मक कुनै तवरले पनि त्यति ठूलो असर नपार्ने उनको बुझाई छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १६, २०७४, ०७:५१:१०